IFTIINKACUSUB.COM: Turkigu waa gumayste Muslim ah.Ka guur Dalkaaga una guur Turkiga maya maya maya !!
Turkigu waa gumayste Muslim ah.Ka guur Dalkaaga una guur Turkiga maya maya maya !!
Qoraalkaygani kuma wajahna kumana socdo, koox ama Xafiis isagu si gaar ah ugu adeega dadyawga Somaliyeed,kaasi oo qabta shaqooyinka ay ka midka yihiin soo saarista Visayaasha Cafimaadka,waxbarashada iyo dhamaan waxkasta oo markaasi dadka Soomalidaa u adeegaaya faa'idana ay ugu jirto.
Hadii aad marka horaba aamin san tahay qaacidada ah Muslimku wax ma khayaano,been ma sheego,kuma danaysto walaalkiisa Muslimkaa ,xaqiiq waxaad u dhawdahay in aad noqoto qof aan jirin, halisna waxa aad u tahay in aad ku lug-godo daynayste aan dantiise moogayn Islaamkana ku khiyaamaynaaya.Turkigu inkasta oo uu yahay dawlad Muslim ah isla markaana guun facwayn ah ,balse inaad si fudud u aamintaa siyasadiisa qotata dheer adiga oo ku qiimaynaaya Muslim nimada taas macnaheedu maaha in aanu ku dhacayn ku khiyanayn,kugu danaysanayn,kaa danaysanayn.
Ma ogtahay in qofkasta oo Somali ah isla markaana hantitisii oo dhan ku maalgaliyey dal shisheeye, in aakhirka dalkiisu uu baaba'aayo,waxaad dalkaagi kala tagaysaa Muwaadin dhaqalii,aqoontii,dhismahii,waxa aad maal galinaysaa nin kugu khiyaamaynaaya Muslinimo,ku dhacaaya,hab siyaasiya kula wareegaaya dhamaan hantilayaashadii.
Unknown 14 March 2019 at 02:49
Turkiga iyo Kenya aniga Turkiga ayaa ii dhaw ayaan qabaa, waayo hiigsiga dheer ee dadkayga iyo dalkayga ay qabaan waxa uu udhaw yahay sida tan Turkiga oo kale caqiidada iyo dhaqankaba waxanu kafogyahay Kenya iyo south africa caqida ahan iyo dhaqan ahaanba marka meel aan ku guuro ama aan ku daydo oo aan ahayn turki ma arkayo.
Qoraalkaygani kuma wajahna kumana socdo, koox ama Xafiis isagu si gaar ah ugu adeega dadyawga Somaliyeed,kaasi oo qabta shaqooyinka ay ka ...
Runtii bahal Abaar la yidhaa ayaa ina aafaysay,hadda Abaaro maaha,dadku afkiisa waxa uu bartay erayga Abaaro ,taasi oo ay jamciyaan kana ...
Qiso yaableh: Guurkii gabadha Jinka ahayd ee Aamina Suldaan.Qaybtii 1-aad.
Sheekadan waxaa ka sheekeeyey Ninkii isagu guursaday gabadha Jinka ah ee Aamina Suldaan,waxa laga yabaa in iswaydisaan su'aal ah side...
Turkigu waa gumayste Muslim ah.Ka guur Dalkaaga un...